PPR, PE, PP Layer Single noma i-Multi-ungqimba Pipe Co- extrusion Production Line - China Qingdao Xinquan Plastic
PPR, PE, PP Layer Single noma i-Multi-ungqimba Pipe Co- extrusion Production Line
Ngo isakhiwo, ukushisa namanzi cishe zisebenzisa PPR ipayipi. Lokhu ipayipi engabeka lula, amanani aphansi futhi oluhlaza, isisindo ekukhanyeni, ephephile futhi zihlanzekile, ukumelana ukushisa, elonakele, londoloza ukushisa kanye ukusetshenziswa isikhathi eside.
2. Mayelana umshini:
* I extruder ilawulwa PLC noma lokushisa isilawuli ukufinyelela eqondile futhi olunembile lokushisa elilawulayo, okuyinto kakhulu uqinisekisa umthamo plasticization; Special isikulufa yakhelwe kuqinisekisa ukusebenza kahle eliphezulu futhi okukhipha okusezingeni eliphezulu; Rigidity high and low umsindo wotho amagiya uyaqiniseka oluthembekayo oqine extrusion ukusebenza nokuphila isikhathi eside;
* Umnikazi we ikhanda Die ngoba PP, PPR, PE ipayipi yakhelwe ku isitayela Kuvunguza noma kubhasikidi isitayela. Isikhala esikhulu esilazayo iqinisekisa i siphephele isikhathi esanele leyo nto; amaphayiphi ekhiqizwa kukhona amancane ukucindezeleka yangaphakathi futhi surface bushelelezi; Umklamo isikhunta nezimo kakhulu, uyakwazi ukubumba zonke izinhlobo PP, PE, PPR amapayipi (ezimbili-ungqimba, ezintathu-ungqimba noma ezine-ungqimba).
Multi-ungqimba ukukhiqizwa ipayipi umugqa umshini yenkampani yethu elalisanda kwakhiwa, thatha 3-ungqimba ukukhiqizwa ipayipi umugqa isibonelo, izingqimba kwangaphakathi futhi yangaphandle zisebenzisa izinto ezintsha, futhi ungqimba oluphakathi nendawo isebenzisa plastic ezase + fibre ingilazi impahla, le design kakhulu inyuka amandla kanye eqine amapayipi, ngesikhathi esifanayo ukwehlisa iindleko ukukhiqizwa.
3. Technical Amapharamitha:
Pipe Umshini Model SJG315 SJG-450 SJG-630 SJG-800 SJG-1200
Pipe Ububanzi mm 90-315MM 110-450 250-630 400-800 630-1200
Kufakiwe amandla KW 200 250 250 300 300 350 400 450 500 600
Previous: HDPE Esibanzi Ububanzi elingenalutho Wall Han Pipe (Under emhlabeni Amanzi Pipe) Ukukhiqizwa Line
Okulandelayo: PVC zophahla iphrofayela Production Line
Black Pipe Ukuze Ukuphuza amanzi
Lukathayela Amanzi Pipe
lukathayela Plastic Amanzi Pipe
kabili Wall Plastic Pipe
Flat Amanzi pipe
Nezimo Irrigation Pipe
Nokucindezela High PVC Pipe
lokushisa High PVC Pipe
Okusaqanda Plastic Pipe
Amanzi perforated pipe
Pipe Futhi nokufaka
Plastic Flat Amanzi Pipe
Popular Ppr Pipe Osayizi Ishadi
Ppr Pipe Futhi nokufaka
Ppr Inqawe plastic
PVC Amanzi Pipe
Inqawe PVC Ukuze amanzi
Encane plastic Pipe
Sn8 HDPE lukathayela Pipe
okungabonakali Plastic Pipe
Labyrinth drip irrigation eyenzeka umugqa ukukhiqizwa ibhande
Inner cylindrical drip irrigation eyenzeka ipayipi producti ...
Faka ipuleti ukuvuza umugqa ukukhiqizwa ngenkasa ipayipi
HDPE Esibanzi Ububanzi elingenalutho Wall Han Pipe (U ...
PVC, PE Single Wall lukathayela Pipe Production ...
PE Carbon Kuvunguza kwagcizelela Pipe Production Line